ColorOS 12 bụ nke gọọmentị ugbu a: akụkọ, ekwentị dakọtara na mgbe ọ ga -abata na Europe | Androidsis
Aaron Rivas | 12/10/2021 21:05 | Mobiles, Noticias
N'ikpeazụ, Oppo ewepụtala ụdị nhazi ọhụụ na nke kachasị ọhụrụ. Nke a na -abịa dịka ColorOS 12 Ma mgbe anyị maralarị ihe mmelite a ga -eweta nke ukwuu, ugbu a anyị nwere nkọwa nke akụkọ ọ ga -enye, nwata nọkwa ọtụtụ.
Mmelite a dabere na gam akporo 12. Yabụ, na mgbakwunye na -abịa na ọrụ na njiri mara nke ya, nke anyị ga -akọwapụta ma emechaa, ọ na -abịa na ihe ụdị sistemụ arụmọrụ Google, yabụ na ọ bịarutere na -ebu ọtụtụ ihe ọhụrụ, ugbu a anyị na -ahụ ha.
1 Ihe niile gbasara ColorOS 12 sitere na Oppo, interface ọhụrụ dabere na gam akporo 12
1.1 Inwekwu nzuzo na nchekwa
1.2 Emojis animated na -abịa na ColorOS 12, a na -akpọkwa ha Omojis
2 Kedu mgbe ọ ga -abata na Europe na ekwentị dakọtara na ColorOS 12: ndepụta ekwentị nke a ga -emelite na interface ọhụrụ
2.0.1 Ekwentị Oppo ga -enweta ColorOS 12 na ọkara mbụ nke 2022
2.0.2 Ekwentị Oppo ga -enweta ColorOS 12 na njedebe nke 2022
Ihe niile gbasara ColorOS 12 sitere na Oppo, interface ọhụrụ dabere na gam akporo 12
Akara ColorOS 12
Iji malite, dịka a tụrụ anya ya, ColorOS 12 na -abịa na ọtụtụ mgbanwe ịchọ mma. Nke a dịkwa na ngalaba nke anyị na -ahụ mgbanwe kachasị, interface ọhụrụ nke mmelite a na -ahazi nke ọma, pere mpe yana, nke ka mkpa, dị ụtọ ilele na iji ya.
N'echiche a, ColorOS 12 na -abịa na ihe ngosi ọhụrụ na ntụgharị maka onyonyo na windo. Akara ngosi ndị a na -enwekwa obere mgbanwe, na -ahazi nke ọma site ugbu a gaa n'ihu. N'otu aka ahụ, ịdị nkọ nke igodo n'ime interface na -eme nke ọma, na -adị elu yana, n'otu oge ahụ, na -enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma. Nke a na -ahapụ anyị, n'etiti ihe ndị ọzọ, nwere nrụzigharị arụnyere yana yana nzukọ dị iche iche, yana yana nhọrọ ọhụrụ nke na -enye anyị ohere idozi nkenke ihuenyo na nkenke.
Ịrụ ọrụ mmelite ọhụrụ a dịkwa elu karịa nke ụdị ndị gara aga. Nke a na-eme ka ọ dakọtara nke ọma, ma ekwentị dị elu, n'ezie, yana ekwentị etiti na ekwentị mmefu ego. N'otu ụzọ ahụ, Anyị na -ahụ ndepụta nke mobiles dakọtara n'okpuru.
Inwekwu nzuzo na nchekwa
ColorOS 12 na -eji nkwalite nzuzo na nchekwa abịa. Site na nke a, ikikere nke ngwa ndị a kapịrị ọnụ karị ma sie ike, mana na -enweghị iwe.
Ebumnuche nke a bụ na onye ọrụ nwere njikwa na ihe ọmụma oge niile nke ngwa etinyere na ekwentị na-eme yana ihe ngwa etinyere na ekwentị mkpanaaka na-enweta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha bụ ngwa ndị ọzọ sitere na Storelọ Ahịa Google Play. na ụlọ ahịa ọzọ na -echekwa ngwa ọ bụla.
Ma obu na ogwe nzuzo ọhụrụ onye bịarutere na -arụrụ ya ọrụ; Site na nke a ị nwere ike ịhụ ikikere niile nke ngwa ndị ahụ jiri n'ime awa 24 gara aga. Site na nke a, ị nwekwara ike ịnweta ụkpụrụ dị iche iche, si otú a na -enye ohere imezi, gbalite na gbanyụọ paramita dị iche iche dịka ịnweta ebe, igwefoto na ọrụ na njirimara ndị ọzọ site na ngwa etinyere na ekwentị mkpanaaka. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike họrọ, n'ihe gbasara ọnọdụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ụfọdụ ngwa nweta ohere kpọmkwem ebe ma ọ bụ ọnọdụ a kapịrị ọnụ, ka onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ghara ịma ebe ịnọ kpọmkwem mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịhọrọ oke. nhọrọ, n'ezie.
Ọrụ ọzọ nke na -abịa na nwelite ngwanrọ ọhụrụ a bụ nke Rịba ama maka iji igwefoto ekwentị ma ọ bụ igwe okwu, ihe na -abata akụkọ na mpaghara nchekwa na nzuzo. Ugbu a, oge ọ bụla ngwa na -eji igwe okwu ma ọ bụ igwefoto ekwentị, a ga -enwe ịdọ aka na ntị site na ekwentị mkpanaaka, site na ọkụ ọkụ LED (ọ bụrụ na ọ dị) ma ọ bụ ụzọ ọzọ.
Emojis animated na -abịa na ColorOS 12, a na -akpọkwa ya Omojis
Ihe na -adịwanye ugbu a na ụdị ọhụrụ nke oyi akwa nhazi site na ndị na -emepụta ekwentị mkpanaka bụ emojis animated. ColorOS 12 chọrọ ka ọ bụrụ akụkụ klọb na ọ bụ ya mere o ji eweta nke ya, nke enwere ike iji na oku vidiyo, ngwa mgbasa ozi mmekọrịta na ozi ngwa ngwa yana foto kọntaktị. Na nke a, a na -akpọ ha Omojis, na ee, ha yiri, na arụ ọrụ, na Memojis Apple, ebe enwere ike ịhazi ha n'ọtụtụ ụzọ yana nkenke zuru oke, ma ọ bụ site n'ụdị dị iche iche nke anya, ọnụ, edozi isi, ụcha ntutu, agba akpụkpọ na metrik ndị ọzọ nwere ike enwere ike gbanwee ya site na ọtụtụ nhọrọ ka ọ dị ka otu.
N'aka nke ọzọ, mmelite ahụ anaghị eji ogwe menu ọhụrụ dị n'akụkụ iji nye ohere ngwa ngwa n'ọtụtụ ntọala yana, ọ bụrụ na -amasị gị, na ngwa dị iche iche. Nke a na -eme ka ụzọ anyị si enweta ngalaba dị iche iche ọsọ ọsọ. Enwekwara ikekekọrịta ihuenyo mkpanaka na kọmpụta nwere sistemụ arụmọrụ Windows iji jiri ya. A na -akpọ atụmatụ a PC Jikọọ.
Kedu mgbe ọ ga -abata na Europe na ekwentị dakọtara na ColorOS 12: ndepụta ekwentị nke a ga -emelite na interface ọhụrụ
Oppo nwere ọmịiko zuru oke iji kpughee ekwentị a ga -emelite na ColorOS 12 yana gam akporo 12 yana ụbọchị nke ha, nke metụtara Europe na ụwa ndị ọzọ, ma dị ka ndị a:
Ekwentị Oppo ga -enweta ColorOS 12 na ọkara mbụ nke 2022
Oppo Chọta X3 Lite 5G.
Oppo Chọta X3 Neo 5G.
Oppo Chọta X2 Pro.
Oppo Chọta X2 Neo.
Oppo Chọta X2.
Oppo Chọta X2 Lite.
Oppo Reno 10x mbugharị.
Ekwentị Oppo ga -enweta ColorOS 12 na njedebe nke 2022
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ColorOS 12 bụ nke gọọmentị ugbu a: akụkọ, ekwentị dakọtara na mgbe ọ ga -abata na Europe